आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीबाट रू.३ अर्व ७२ करोड संकलन – Himal Patrika
Home /आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीबाट रू.३ अर्व ७२ करोड संकलन
साउन १२, धनगढी । आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीले रू. ३ अर्व ७२ करोड ६ लाख २५ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा अघिल्लो आव २०७४/ ०७५ भन्दा ८ दशमलव ८४ प्रतिशत बढि राजस्व संकलन गरेको हो ।
राजस्व विभागले कुल रू.३ अर्व ४२ करोड २० लाख ३८ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकेकोमा लक्ष्यभन्दा ८ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढि राजस्व संकलन भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख काशीराज पौड्यालले बताए ।
कार्यालयले आव २०७५/ ०७६ मा सवैभन्दा बढि अन्तशुल्कबाट रू.१ अर्व ४५ करोड ८३ लाख १७ हजार, आय करवाफत रू.१ अर्व २१ करोड २९ लाख ८७ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करवाफत रू.८४ करोड ५१ लाख ५४ हजार, घर बहालवाफत रू. १० करोड १२ लाख ९१ हजार, ब्याजवाफत रू.२ करोड ४९ लाख ९२ हजार, स्वास्थ्य करवाफत रू.७ करोड ११ लाख ६२ हजार तथा शिक्षावाफत रू.६७ लाख २२ हजार संकलन भएको उनले बताए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीले प्रत्येक वर्ष राजस्व संकलन बढाइरहेको निमित्त प्रमुख पौड्यालले बताए । आव २०७४÷०७५ मा पनि लक्ष्यभन्दा ८ दशमलव ७० प्रतिशतले राजस्व बढाएको तथ्यांक रहेको उनले बताए । नयाँ–नयाँ व्यवसाय दर्ता हुने क्रम बढ्नु तथा व्यवसाय विस्तार र स्तरोउन्नतीमा भएको बढोत्तरीले राजस्व संकलनमा वृद्धि हुँदै गएको कार्यालयले बताएको छ ।
विशेष गरी साउनदेखि असोज महीनासम्म सेवाग्रहीको भिड हुने गरेको छ । धनगढीमा सेवाग्राहीको भीड बढ्न थालेपछि कैलालीको लम्कीमा शाखा कार्यालय विस्तारपछि केहि सहज भएको कार्यालयले बताएको छ ।
310पटक जम्मा पढिएको,1पटक पढिएको आज